भारतभन्दा झन् ठूलो शत्रु बनेर निस्कियो चीन, सबै नेपालीको मनमुटु चस्किनेगरी देखायो निकृस्ट हर्कत ! – Annapurna Post News
June 23, 2022 sujaLeaveaComment on भारतभन्दा झन् ठूलो शत्रु बनेर निस्कियो चीन, सबै नेपालीको मनमुटु चस्किनेगरी देखायो निकृस्ट हर्कत !
काठमाडौं । चीन नेपालको भारतभन्दा ठूलो शत्रु बनेर निस्किएको छ । सिमा मिच्ने मामलामा चीन नेपालका लागि भारतभन्दा झन् ठूलो शत्रु बनेर निस्किएको हो । गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ को रुइला नाकामा चीन सरकारले दुई देशीय समन्वय नगरी तारबार लगाएको छ। सीमानामा संरचना बनाउँदा अपनाउनु पर्ने कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरी तारबार लगाएको हो। यस विषयमा न परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छ, नत जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै।
आफ्नो क्षेत्रमा तारबार गरेका चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई घुमफिर गर्न पनि कडाइ गर्ने गरेका छन्। ‘केही दिनअघि एकजना लामा सीमानामा पुगेका थिए। उताका सेनाले कोभिड ड्रेस लगाइदिएर फर्काइदिएछन्’, साम्दोका छिरिङ लामाले भने।